အမှတ်တံဆိပ်ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းနှင့်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ပါသောစိတ်ကြိုက်ဂေဟစနစ်နှင့်သက်ဆိုင်သောကြော်ငြာ - ပတ္တူစုတ်နှင့်တုတ်အိတ် | Zhihongda
ဝါဂွမ်းစက်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝါဂွမ်း၏ပစ္စည်းများ။ ၎င်းတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပေါင် ၅၀ ကျော်အထိသိုလှောင်နိုင်ပြီးသမားရိုးကျကုန်စုံအိတ် ၂-၃ ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကုန်စုံအိတ်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လေးလံသောတာဝန်နှင့်ပလတ်စတစ်ကိုအမှိုက်ပုံနှင့်သမုဒ္ဒရာထဲမှထုတ်ယူခြင်းအားဖြင့်!
၁။ စိတ်ကြိုက်အရောင်၊ အရွယ်အစား၊ အမျိုးအစားစသည်တို့သည် ၀ ယ်လိုအားအားလုံးရရှိနိုင်သည်
၂။ ဝါဂွမ်းစက်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သွယ်ဝိုက်သောပစ္စည်းများ။ ၎င်းတို့သည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပေါင် ၅၀ ကျော်အထိသိုလှောင်နိုင်ပြီးသမားရိုးကျကုန်စုံအိတ် ၂-၃ ကိုအစားထိုးနိုင်သည်။ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကုန်စုံအိတ်များကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လေးလံသောတာဝန်နှင့်ပလတ်စတစ်ကိုအမှိုက်ပုံနှင့်သမုဒ္ဒရာထဲမှထုတ်ယူခြင်းအားဖြင့်!
၃။ စီမံကိန်းများနှင့်လက်ဆောင်များအတွက်အလွန် ၀ မ်းသာပါသည်။ DIY အတွက်အထူးကောင်းမွန်သည်။ မိခင်များနေ့အတွက်စီမံကိန်းအတွက် DIY စီမံကိန်းများ၊ ခရစ်စမတ်လက်ဆောင်များအတွက်လက်ရာမြောက်ခြင်း! မွေးနေ့ပါတီလက်ဆောင်ဖြစ်သည်။ သူများသည်ပတ္တူအိတ်များသည်သူတော်ကောင်းတရား၏ရုပ်ပုံများကိုပြုလုပ်ရာတွင်ထိရောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ချစ်စရာကောင်းပြီး DIY အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ အရည်အသွေးအရလက်မှုပညာဖြင့်သော်လည်းကောင်းပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ပါတီပွဲတစ်ခုလုပ်မယ်။ မင်းက acrylic ဆေးကိုသုံးနိုင်တယ်။ ကလေးတွေကပေါက်ကွဲတယ်။ အရွယ်အစားကောင်းမွန်ပြီးထည်ပန်းချီအတွက်ကောင်းမွန်သည်။
၄။ လက်မှုပညာစီမံကိန်းအတွက်ဘာပေးရမယ်ဆိုတာကိုတွေးမိပါသလား။ ဒီအိတ်ကသူတို့ကိုယ်သူတို့ယာဉ်ဆေးသုတ်ခြင်းဖြင့်အလှဆင်ရန်စိတ်ကူးနှင့်အတူ။ ကောင်းမွန်သောဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ခြင်းသည်ပန်းထိုးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကိုယ်ပိုင်ဆေးလက်ဆောင်များအတွက် HTV ကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆေးထိုးခြင်း! ဒီအိတ်တွေကတော့အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်တယ်။ သူတို့ကသူတို့အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းပစ္စယတွေအများကြီး fit နိုင်အလွန်ကောင်းစွာလုပ်နေကြသည်။ ပန်းချီအတွက် acrylic paint နှင့် brush ကိုသုံးနိုင်သည်။ အပေါ်ဘက်တွင်ဆေးသုတ်ရန်လုံလောက်သောပါးလွှာသည်။ ၎င်းသည်ထည်သုတ်ဆေးကောင်းစွာကိုင်ထားနိုင်သည်။
၅.၁ YEAR NO-RIP အာမခံ - ၀ ယ်ယူပြီး ၁ နှစ်အတွင်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသောအိတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်အစားထိုးပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ PACKS ဖြင့်တစ်ဆင့်အကြိမ်များစွာအမှာစာများချွေတာပါ။
Craf အတွက်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သော 12oz Bag Bag DIY ပုံစံ ...
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသော Eco-friendly Black Plain Cotton ...
ကိုယ်ပိုင်အရောင်ဖော်ရွေ Eco Black ပူးတွဲ ...
Zipper Pen Case အလှကုန်ပတ္တူစ ... \_ t